Windows 11 - Windows 11 သိကောင်းစရာများ၊ လှည့်ကွက်များ၊ How -To ဗီဒီယိုများကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်း
နေအိမ်/Windows ကို 11
Microsoft အကောင့်မပါဘဲ Windows 11 Home ကို အသုံးပြုပါ။
Microsoft အကောင့်မပါဘဲ Windows 11 ကို ထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း Pro ဗားရှင်းကိုသာ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အိမ်သုံးဗားရှင်းအတွက်...
Windows 11 တွင် ဖိုင်များနှင့် ဖိုဒါများကို စာဝှက်ပါ။
ကုဒ်ဝှက်ခြင်းဖြင့် Windows 10 တွင် သင့်ဖိုင်များနှင့် ဖိုဒါများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဤစာဝှက်စနစ်သည် အလွန်ထိရောက်သောအခါ ...
Windows 11 အောက်ရှိ ဖောင့်များကို ထည့်သွင်းပါ - ၎င်းသည် ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။
ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ Windows 11 တွင်ဖောင့်များစွာရှိသည်။ ဆက်တင်များအောက်တွင် သင်သည် ဤဖောင့်ဖိုင်များကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ...
မျက်နှာပြင်ကီးဘုတ် အလုပ်မလုပ်ပါ - ကူညီရန် အကြံပြုချက် ၆ ခု
လုပ်ဆောင်ချက်မပါဘဲမျက်နှာပြင်ကီးဘုတ်။ ရံဖန်ရံခါ၊ Surface Keyboard အလုပ်မလုပ်ပါ။ Microsoft Surface ကိုသုံးတဲ့အခါ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်...
6 ။ နိုဝင်ဘာလ 2021
5 ။ နိုဝင်ဘာလ 2021
Windows5တွင် Task Manager ကို စတင်ရန် နည်းလမ်း ၅ ခု
Task Manager သည် Windows တွင် အလွန်အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာစွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ Task Manager ဖြင့် သင် e.g. B. အရေးကြီးသော အချက်အလက်ကို ပြပါ...
Windows 11 တွင် စကားဝှက်ထည့်ပါ၊ နောက်ပိုင်းတွင် စနစ်ထည့်သွင်းပါ။
Windows 11 ကိုစဖွင့်ရာတွင် စကားဝှက်မသတ်မှတ်ထားပါက၊ သင်၏အသုံးပြုသူအကောင့်သို့ စကားဝှက်ထည့်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။